The Ab Presents Nepal » रेडलाइट एरिया बनाउनुपर्छ – मेयर वड !हजुरहरुको विचार कमेन्ट गर्नु होस् !
रेडलाइट एरिया बनाउनुपर्छ – मेयर वड !हजुरहरुको विचार कमेन्ट गर्नु होस् !
धनगढी उप महानगरपालिकाका मेयर नृप बहादूर वडले बलत्कारका घटना बढ्दै गएकोप्रती चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । बलत्कारका घटना बढ्दै गएकाले अब छुट्टै रेडलाइट एरिया बनाउनु पर्ने मेयर वडको भनाई छ ।
बलत्कारका घटना संगै बेश्याबृती मेट बढिरहेको भन्दै मेयर वडले रेडलाइट एरिया आवश्यक भइसकेको दावी गरे । रेडलाइट एरियाका लागी तिनै तहका सरकारले सोच्नुपर्ने बेला आएको मेयर वडको भनाई छ । जताततै बलत्कारका घटना बढिरहेकाले कुनै निश्चित ठाउँलाई रेड लाइट एरिया तोकेमा बलत्कारका घटना घट्ने मेयर वडको भनाई छ ।
यौन व्यवसाय संगै महिलामाथी भइरहेका हिंसालाई समेत रेडलाइट एरियाले नियन्त्रण गर्ने उनको भनाई छ । रेडलाइट एरिया बनाउने बिषयलाई बहसमा ल्याउनुपर्ने उनले बताए । यौन क्रियाकलाप तथा यौन व्यवसायलाइनै रोक्न धेरै प्रयास गरेपनि लुकी छिपी यौन व्यवसायभ इरहेको भन्दै उनले रेड लाइट एरिया तोकेमा अन्य क्षेत्रको बिकृतीमा कमी आउने बिश्वास व्यक्त गरे । सकेसम्म प्रदेश, प्रदेशमा रेडलाइट एरिया बनाउनुपर्ने उनको भनाई छ ।
मेयर वडले यौन शिक्षा सम्बन्धि पत्रकारहरुको क्षमता बिकास तालिमको उद्घाटन कार्यक्रममा सो कुरा बताएका हुन् । उनले यौन शिक्षा सम्बन्धि अँझैपनि ज्ञान नहुँदा समस्या श्रृजना हुने गरेको बताए । यसलाई सबै क्षेत्रले जनचेतना फैलाउन जरुरी रहेको मेयर वडले बताए ।